Tsamba Inobva kuDare Rinotungamirira | Bhuku Regore ra2016
Muprofita Isaya akabvuma kuti kubudirira kwose kwakaita Umambo hwaJudha kwaibva pakuti vaikomborerwa naJehovha. Pana Isaya 26:12, akati: “Jehovha, . . . zvose zvatakakwanisa ndimi makatiitira.” (Bhaibheri Dzvene muChiShona Chanhasi) Kufunga zvese zvatakabudirira kuita mugore rebasa rapfuura, kunoita kuti titaurewo mashoko akadaro. Zvechokwadi Jehovha ari kuita ‘zvinhu zvinoshamisa zvisati zvamboitwa!’ (Eks. 34:10) Funga nezvemamwe makomborero aakatipa.
Nzvimbo yedu yepaIndaneti yejw.org iri kushandiswa chaizvo. Iye zvino yava kuwanikwa mumitauro inopfuura 600, uye pane mabhuku nezvimwewo zvinogona kuverengwa nekudhaunirodhwa mumitauro inopfuura 750. Ko jw.org iri kubudirira here pakusvitsa chokwadi kune vanhu vanoda kudzidza nezvaMwari? Chimbofunga nezvemumwe murume nemudzimai avo vakanga vaodzwa mwoyo neunyengeri hwavainge vaona huchiitwa muzvitendero. Pavaitsvaka kutungamirirwa naMwari, vakabva vangosanganidzanawo nejw.org. Vakatanga kugara vachiendapo vachiverenga mabhuku nekuona mavhidhiyo aripo. Vakatodhaunirodha kabhuku kaKuongorora Magwaro Zuva Nezuva uye vakatanga kuverenga rugwaro rwezuva pamwe chete nevana vavo vari kuyaruka. Pazuva ravakashanyirwa neZvapupu zvaJehovha pamba pavo, vaitoverenga rugwaro rwezuva. Zvapupu zviya zvakazoziva kuti mhuri iyi yakanga yatochinja zvakawanda muupenyu hwayo nekuda kwezvayaiverenga pajw.org. Vakanga vabvisa matattoo nemhete dzainge dzakabayirirwa pamiviri yavo, vakarasa mifananidzo yavaishandisa pakunamata, vakarega kupemberera mazororo enyika uye kuona mafirimu akashata. Zvese izvi vakazviita vasati vaonana neZvapupu! Kutaura kuno, vabereki vacho nemwanasikana wavo vatova vaparidzi uye vabereki vacho vari kuronga kubhabhatidzwa munguva pfupi iri kutevera.
Takanzwa vanhu vakawanda vachitenda chaizvo humwe urongwa hwakanaka hwatakaitirwa hweJW Broadcasting. Purogiramu iyi inoitwa mwedzi nemwedzi yava kuwanikwa mumitauro inopfuura 70 uye nekufamba kwenguva ichange yava kuwanikwa mune mimwe mitauro yakawanda. Mhuri zhinji dzinoona purogiramu yacho pamanheru oKunamata Kwemhuri. Imwe hama yakati: “Sangano raJehovha rakura zvisina kana mukare akamboona; asi kunyange rakura kudaro, tava kunzwa tiri pedyo chaizvo nehama dziri kumahofisi edu makuru!”
Magungano emunharaunda agara ari chinhu chinofadza chaizvo kuvanhu vaMwari, uye ndizvo zvakanga zvakaitawo regore rebasa ra2015. Pagungano iri pakaratidzwa mavhidhiyo nemapikicha zvinokwana 42, uyewo paiva nemimhanzi yainakidza yairidzwa pese paitanga purogiramu kwemazuva acho ese ari matatu. Imwe hama yava nenguva ichishumira Jehovha yakataura nezvegungano racho ichiti, “Zvaiita sekuti hapana aida kusimuka paakagara purogiramu yacho iri pakati nekuti hapana aida kurasikirwa kana nepfungwa imwe chete zvayo.” Mumwe mumishinari achitaura nezvegungano regore rapera akati, “Mavhidhiyo acho akaita kuti ndinyatsonzwisisa chokwadi uye Umambo.”
Mugore rebasa rapfuura, Jehovha akatikomborerawo nenziyo dzeUmambo itsva dzakati kuti. Mumwe murume nemudzimai vakanyora kuti: “Patinoteerera nziyo itsva idzi, tinonzwa sokuti Jehovha ari kutimbundira. Dzakatinyevenutsa panguva dzakawanda dzatainge takasuwa.” Magungano edu akaita kuti tione kuti hama nehanzvadzi dzedu dzakashanda nesimba pakuridza nekuimba mimhanzi iyi, zvese izvi vachizviitira kuti Jehovha arumbidzwe!
Tinokukurudzirai mose kuti mutevedzere Jehovha pakugamuchira vaya vanenge vadzoka kwaari
Ungano yenyu iri kushandisawo here zvingoro pakuparidzira munzvimbo dzinopfuura nevanhu vakawanda? Nzira iyi yekuparidza iri kubudirira chaizvo! Iri kuita kuti vamwe vanhu vanogara munzvimbo dzisingasvikwe nemunhu wese wese vanzwe chokwadi kekutanga muupenyu hwavo, uyewo kuti vakawanda vabatsirwe mune zvekunamata, kusanganisira Zvapupu zvisingachaiti mabasa echiKristu. Muna January 2015, mumwe murume wekuSouth Korea akaenda paiva nechingoro chinoshandiswa pakuparidza. Akataura kuti akanga atanga kufunga zvakadzama nezvenyaya dzekunamata. Akabva atanga kudzidza Bhaibheri. Muna February, akapinda misangano kekutanga, uye muna March akasiya kuputa fodya. Muna April, akashanyira hofisi yebazi yekuSouth Korea, uye achiri kufambira mberi chaizvo pakunamata. Iyi inongova nyaya imwe chete pane dzakawanda dziri kuitika dzatakagamuchira kuno kumahofisi makuru.
Tine chivimbo chokuti bhurocha ratakawana pagungano richakurudzira vakawanda vaimboita mabasa echiKristu kuti vadzoke kuna Jehovha Mwari wedu ane rudo, nguva isati yapera! Tinokukurudzirai mose kuti mutevedzere Jehovha pakuvagamuchira nemaoko maviri.—Ezek. 34:16.
Zvechokwadi Jehovha akakomborera vanhu vake mugore rebasa rapfuura. Kuchine zvimwe here kumberi? Ngatimirirei tizoona. Asi zivai kuti isu hama dziri muDare Rinotungamirira tinokudai chaizvo mose uye tinogara tichikunyengetererai.
Tinokutendai nekushanda nesimba kwamuri kuita,